Yintoni i-ROA? okanye yaziwa njenge Return on Assets | Ezezimali
Ivela kwigama lesiNgesi "Buyisela kwiiasethi”, Kukwaziwa nangokuthi "Ukubuya kutyalo mali" o ROI. Ngenye yeeparameter ezibaluleke kakhulu namhlanje, ngoku isetyenziswa zizo zonke iinkampani ezifuna ukuseka ezazo inzuzo, Yena ROA, iqulethe ngokusisiseko ukubala la ulwalamano ekhoyo phakathi ukuxhamla ifunyenwe ngexesha elithile kunye asethi Ihlabathi liphela lenkampani.
Ukubaluleka kwayo kusekwe ikakhulu kwinto yokuba ivumela oko umbhalisi ngqo isidanga se ngempumelelo que ilifa Los asethi iitotali a nkampani, ngaphandle kweefom zezimali ezisetyenzisiweyo, kunye nomthwalo mali yelizwe apho inkampani iqhuba khona imisebenzi yayo yorhwebo. Endaweni yokuba ROA ivumela umntu ophetheyo ukuba alinganise ubungakanani be asethi Yenkampani ye kuvelisa renta yi bona ngokwabo.
1 Uyibala njani i-ROA?
2 Umzekelo wokubala we-ROA
3 I-ROA iyahluka phakathi kwamashishini ahlukeneyo
4 I-ROA iququzelela ukuthelekisa phakathi kweenkampani
6 Umahluko phakathi kwe-ROE kunye ne-ROA
Uyibala njani i-ROA?
Ipharamitha ye-ROA inokubalwa ngale ndlela ilandelayo:
ROA = Izibonelelo ze-EBIT
Mhlawumbi kubonakala kunzima ukuyiqonda, ngenxa yesigama, ukucacisa ngakumbi ukuqonda kwayo kufuneka uqonde ukuba inzuzo I-EBIT ekuthethwa ngayo kwifomula ibhekisa kwezi zibonelelo zifunyanwa yinkampani ngaphambili de isaphulelo Los umdla, i irhafu, kwaye i Ukuhlawula amatyala.
Kwinxalenye yesibini yefomyula uthetha ngayo Iimpahla zizonke, intsingiselo yayo ihambelana ngqo ne I-asethi ephakathi de dos iibhalansi ezilandelelanayo.
Isizathu sokuba kutheni I-EBIT isetyenziswa njengemilinganiselo yokubala i-ROA, endaweni yokusebenzisa inzuzo emva kwenzala kunye neerhafu, ikakhulu ngenxa yokuvela ngeniso que qhubeka ye asethi ngokupheleleyo ukuzimela kwe la umthwalo mali malunga inzuzo nakumthombo wemali osetyenzisiweyo, zizinto zangaphandle.
Este Ipharamitha ibonisa ukuba ukhetho ine yethu nkampani nge asethi yeyakho, ngamanye amagama, ingakanani inzuzo nganye nganye euro unayo i-invernt kuyo, eluncedo kakhulu xa ufuna ukwenza uthelekiso phakathi ezahlukileyo iinkampani, ukuba nje zikwicandelo elinye, kuba inzuzo yotyalo-mali iyahluka ngokuxhomekeke kwicandelo ngendlela ebaluleke kakhulu. Ngokwesiqhelo, singatsho ukuba isalathiso ROA enkulu kune-5% Yenziwe kuvelisa unayo inzuzo ebalulekileyo.
Ku malunga nokubalwa kwe inzuzo Kwinkampani, Entre ii-asethi eziphakathi
Apho ifayile ye- ukuxhamla ibhekisa ngqo kwi ukuxhamla ndiyifumene ngaphambili ye indleko ezezimali kunye nefuthe Irhafu, ngelixa i-asethi kufuneka ilinganiswe kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo njengoko sele kukhankanyiwe.
Umzekelo wokubala we-ROA
Umzekelo wokuqala lishishini elenza amalungu, i ROA ingayi Inzuzo yokuphendula Yintoni efunyanwa kulo msebenzi yahlulwe phakathi kwe asethi zeshishini, ezi zinokuvela: kumasango, oomatshini, imali, okanye isitokhwe kuluhlu lweempahla.
Ngendlela ye- ngenye indlela Ungayifumana i- ROA ngaphezulu komda wentengiso, ukuba ithathwa njenge:
ROA = Umda kwintengiso x Ingeniso yeasethi
Ifomula apho i Umda kwintengiso es igual kwi:
Kwaye apho ifayile ye- Ingeniso yeasethi es igual a:
Umyinge weeasethi zizonke
Ukuqhubeka nomzekelo wenkampani eyenza iindawo, kukho izinto ezimbini ezahlukeneyo ukubala la inzuzo yeshishini, Ezi zezi Umthamo wentengiso uwonke y umda ofezekisiwe kwintengiso nganye. Oku kuthetha ukuba ukufezekisa ingeniso ye- 10% kwinkampani yamalungu, zimbini iindlela ezahlukeneyo zokufezekisa oku.
Eyokuqala iyathengisa 10 iimveliso ezinenzuzo ye 1% kwaye okwesibini kuthengisa isiqwenga esinye ngenzuzo ye 10%. Ngolunye lwezi zikhetho zimbini, kufunyanwa isiphumo esifanayo, into ebalulekileyo kukuchaza ngokuchanekileyo indawo oya kuyo ishishini lakho, kuxhomekeke kwinto oyifumeneyo ukufumana into eluhlaza, phakathi kwezinye izinto, ukuba awuyenzi elona xabiso liphantsi, linikezela ngeyona nto isemgangathweni kunye neerhafu, ukuba uyakwazi ukuthengisa ngexabiso elithengisa kakhulu kufuneka ufumane intengiso enkulu ngengeniso encinci, edibeneyo iya kuqala ukuvelisa inzuzo enkulu, ukuba nje unentengiso efanelekileyo iqela.
I-ROA iyahluka phakathi kwamashishini ahlukeneyo
Nokuba yeyiphi na inkampani eyinkampani, kulungile ROA Nguye onexabiso elingaphezulu kwe-5%, nangona eli xabiso lihlala liguquka ngokuxhomekeke kwicandelo lezemveliso elihlalutywayo. Kungenxa yokuba ngokucacileyo inkampani evela kumzi mveliso we-metallurgical ayifani nendawo yokutyela embindini weMadrid.
Oku kungenxa yotyalo-mali lokuqala ukuqala ishishini, kuba, ukuba nenkampani enotyalo-mali oluphezulu lokuqala lweeasethi, kuya kuba nakho ukuthengisa ngakumbi kwaye kuya kuba nakho ukufikelela kwabo bathengi bafuna ixabiso eliphezulu lemveliso.
Kwelinye icala, ukuba iqala ngenani elincinci leeasethi, inkampani iya kufuneka yibuyise kwintengiso, ukuze ukwazi ukuthenga okungakumbi ixesha ngalinye, kuxhomekeke kwimfuno yayo.
Xa ulawula ukufumana iiasethi kwelona xabiso liphezulu lemarike, ngokukhupha okanye ukuvelisa, unokhetho lokulawula imfuno yemveliso, isenzo esingahambelaniyo nembono yam, kodwa esiqhele ukwenziwa ngoo monopolies abakhulu.
I-ROA iququzelela ukuthelekisa phakathi kweenkampani
Umzekelo ocacileyo wokusebenzisa kwayo ukuthelekisa phakathi kweenkampani kukuba, inkampani ecele imali-mboleko yokuxhasa oomatshini bayo kwilizwe elinomthwalo werhafu omkhulu kakhulu, iya kuba nayo ROA Ngaphandle kwelinye ilizwe elinomthwalo ophantsi werhafu, okanye elisebenzise izixhobo zalo ukuxhasa ishishini, kodwa lithengisa ngokufanayo. Ukwenza ukuba kwenzeke oku, uthelekiso phakathi kweenkampani ezikwicandelo elinye, nokuba zisebenza kumazwe ahlukeneyo ngokupheleleyo kunye neemeko.
Ulwazi lwabo luvumela ukubonisa ukuba inkampani inokwenza ntoni nge asethi into onayo; Ngamanye amagama, ingakanani inzuzo ibonelela ngeyuro nganye etyalwe kwinkampani okanye kuluntu. Umzekelo, inkampani yeoyile ene- ROA del 15% kuthetha ukuba nganye I-euro etyalwe kwinkampani ukufumana utyalomali olutsha, iya kuvelisa 15 iisenti de euro njengaye ukuxhamla.
El injongo Igosa eliyintloko lezemali kuyo nayiphi na inkampani, kukuphucula inzuzo efanayo, ngakumbi ukuba kukho utyalomali olwenziwe kutshanje, neziphumo ezicace gca ziyafuneka. Ngapha koko, le yi undoqo efanayo zemali a nkampaniNgamanye amagama, sisakhono esinaso sokuvelisa ukuhamba kwemali okwaneleyo ukufezekisa ezo njongo zibekiweyo.
La inzuzo unantoni asethi imele inzuzo zemali Le nkampani inayo, oku kuthetha ukuba inzuzo efunyenweyo kwinkampani nge la utyalo mali kuzaliseka. Oko kukuthi, ixabiso lilonke elisekwe kwimisebenzi yesiqhelo.
Ngamafutshane, linyathelo elivavanya ukusebenza kakuhle kwenkampani, kwaye lisinika umfanekiso obanzi wesibonelelo esinokuveliswa yinkampani kwizixhobo ezityaliweyo.
Ngokusekwe kwifomula yokufumana ROA Okubonisiweyo kuwe, sinokuqonda ukuba yintoni ekufuneka yenziwe yinkampani ukuze iyiphucule ROA:
Yandisa umda wentengiso, ngokunciphisa iindleko zokuvelisa kunye nemveliso okanye ngokunyusa amaxabiso emveliso.
Yandisa ukujikeleza kweeasethi, ukonyusa inani lokuthengisa kwiimarike ezintsha okanye kwa-ezo zenzo zorhwebo ezinceda ukuthandwa kunye nokuthengisa kwenkampani.
Njengokuhlalutya, sinako dos iimodeli ezahlukeneyo ukufumana imbuyekezo ephezulu kwiiasethi: imodeli yokuqala ziinkampani ezinomda wenzuzo ephezulu ezinje ngeempahla zodidi, iimveliso ezinje ngeApple, iRolex, iBentley, kwaye kwelinye icala sinemodeli yeenkampani ezinemida zincinci de inzuzo kwiimveliso zabo, kodwa nge enorme ukujikeleza ye asethi, iimeko ezinje: McDonald's, Burger King, Pizza Hut.
Umahluko phakathi kwe-ROE kunye ne-ROA
Kuya kufuneka uchaze ngokucacileyo ifayile ye ROA kunye INDLELA kuba, nangona kwezinye iimeko zihlala zingamanani alinganayo, kwezinye iimeko azifani.
Ukuba inkampani ayinatyala, i ROA kunye INDLELA baya kudibana. Kodwa kwimeko apho inkampani inamatyala alo naluphi na uhlobo, ke INDLELA iya kuhlala iphezulu kune ROAOku kungenxa yokuphakama okwenzeka kwityala, kuba azininzi izinto zexabiso ezizinzileyo ezifunekayo ukwenza imisebenzi yeshishini ngokwesiqhelo.
El INDLELA Linganisa umthamo ukuba inkampani ekuthethwa ngayo, ukuze umvuzo ngokwezoqoqosho ukuya abanini-nxaxheba ezinxulumene noku, ke ukuba ibandakanya imiba yamatyala ezemali kunye nerhafu.
El ROA Endaweni yoko, isetyenziselwa ukulinganisa ngokuchanekileyo ukusebenza kweasethi iyonke yenkampani, nokuba yeyiphi na indlela exhaswa ngayo kunye nemithetho yerhafu kwilizwe apho imisebenzi yenkampani yenziwa khona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Ezopolitiko » Yintoni i-ROA?
Ivenkile yentengiso: yintoni iBPA?